चीनले लिपुलेक नजिकै चाल्यो यस्तो कडा कदम, नयाँदिल्लीमा खैलाबैला, अब के गर्लान मोदी ? — sancharkendra.com
चीनले लिपुलेक नजिकै चाल्यो यस्तो कडा कदम, नयाँदिल्लीमा खैलाबैला, अब के गर्लान मोदी ?
काठमाडौं । सीमा विवादलाइ लिएर नेपाल-भारतबीच तनाब बढिरहेका बेला यता चीनले भने नेपाल-भारत सिमानजिक अर्का कडा कदम चालेको छ । चीनले लिपुलेक नजिकैको सीमावर्ती क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार चीनले ‘पिपुल्स लिबरेसन आर्मी’ पीएलए को एउटा बटालियनलाई लिपुलेक नजिकै तैनाथ गरेको छ ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद बढिरहेको समयमा चीनले एकाएक सो क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाएको भारतीय मिडियाको दावी छ । चीनको सो भूमिकालाई भारतीय मिडियाले आशंकाका दृष्टिले हेरेका छन् । भारतीय शीर्ष सैन्य कमाण्डरलाई उद्धृत गर्दै केही भारतीय अखबारका अनलाइन संस्करणले शनिबार यसबारे समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
यसअघि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई समेटेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । सीमा समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न लगातार नेपालले जोड दिँदै आए पनि भारतले कोरोना संकट समाधान भएपछिमात्र वार्तामा बस्ने जवाफ दिएको थियो ।
तर त्यसबीचमै भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि भने नेपालले पनि आफ्नो प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा संशोधन गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागका रुपमा समेटेपछि नेपाल–भारत सीमा विवादले दुई देशबीच कुटनीतिक सम्वादहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
उल्लेखनीय छ, भारत र चीनबीच करिब तीन महिनादेखि लद्दाख क्षेत्रमा सैन्य तनाव जारी छ । गत जुन १५ मा सीमा क्षेत्रमा दुई देशका सेनाबीच हिं’स्र’क झ’ड’प हुँदा २० भारतीय सैनिकको मृ’त्यु भएको थियो । पछिल्लो समय दुई देशबीच भएको कयौं चरणको वार्तापछि उक्त क्षेत्रबाट दुवै मुलुकका सेना पछाडि हटेको भनिए पनि अवस्था सामान्य भइसकेको छैन ।
यस्तै भारतले नेपालीलाई कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र प्रवेशमा रोक लगाउन भन्दै पत्र लेखेपछि नेपालले त्यसको जवाफ फर्काएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले मंगलवार पत्रको कडा जवाफ फर्काएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले नेपाली भूभागमा नेपाली नागरिकको आवतजावत स्वाभाविक भएको बताएको छ । जुलाई १४ मा भारतको उत्तराखण्ड राज्यको धारचुला जिल्लाका उप–जिल्लाधिकारीले पठाएको पत्रको जवाफ फर्काउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले लिम्पियाधुरा, कुटी,नाबी, गुंजी, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्रहरु नेपालको भूभाग रहेको स्पष्ट नै भएको बताउँदै ती भूभागहरुमा नेपालीहरुको आवत–जावत स्वाभाविकै रहेको प्रतिक्रिया दिएको हो ।
दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरु र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरु अनुसार काली(महाकाली) नदी र सोपूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुंजी, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्रहरु नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।’
यी समूहले मिडियाको ध्यान आकृष्ट गरी दुवैतिरका अधिकारीका लागि समस्या निम्त्याउन चाहेको पनि पत्रमा लेखिएको थियो । भारतले अतिक्रमण गरेका यी क्षेत्रलाई समेटी नेपालले केही समयअघि नयाँ नक्सा प्रकाशित गरिसकेको छ । यी भूभाग समेटिएको नक्साअंकित निसान छाप पनि प्रयोगमा आइसकेको छ । भारतले नेपाली भूमि कालापानी र लिम्पियाधुरा हुँदै मानसरोवर जाने बाटो बनाएपछि दुई देशबीच सीमा विवाद बढेको हो ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि बोल्यो डब्लूएचओ
कोरोना संक्रमण झनै बढेपछि ओली सरकारले देशभर लागु गर्यो फेरि यस्तो नयाँ कडा नियम
मोदीको निर्वाचन क्षेत्रमा नेपालीमाथि भएको अत्याचारबारे मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले लिए यस्तो कडा एक्सन
कतै तपाइको मोबाइलमा कोरोनासम्बन्धी यस्तो एसएमएस त आएको छैन ? सावधान रहनुहोस
देशभर बाढीपहिरोले दर्जनौंको ज्यान लिइरहेका बेला मौसमसम्बन्धि फेरी आयो यस्तो नया अपडेट